दसैँको दिन चिनियाँ राजदूत यान्छीले के गरिन त्यस्तो ? जसकारण नेपालदेखि चीनसम्म भयो चर्चा — Sanchar Kendra
दसैँको दिन चिनियाँ राजदूत यान्छीले के गरिन त्यस्तो ? जसकारण नेपालदेखि चीनसम्म भयो चर्चा
काठमाडौँ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले दसैंको उपलक्ष्यमा नेपालीहरुलाई शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । दूतावासस्थित नेपाली सहकर्मीहरुसँग टीका लगाएर दसैं मनाउँदै गरेको तस्बिरसमेत उनले सार्वजनिक गरेकी छन् ।
विजया दशमीको दिन ट्वीटरमा टीका जमरासहितको तस्बिर पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘मेरा नेपाली सहकर्मीहरूसँग दशैं मनाउन पाएकोमा खुशी छु । सबै नेपाली साथीहरूलाई सुस्वास्थ्य सुख र उन्नतिको लागि मंगलमय शुभकामना गर्द छु।’
राजदूत यान्छीले यसअघि पनि नेपालीहरुका विभिन्न चाडवाडको अवसरमा शुभकामना दिएकी थिइन् । उनले यसरी दसैँ मनाएपछि नेपालदेखि चीनसम्म चर्चा चलेको छ । यसैबीच यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंको अवसर पारेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटही गरेको छ । हरेक वर्ष सर्वसाधारणहरुका लागि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अविर नलगाउने, नोटमा केरमेट नगर्ने, पानीमा नभिजाउने, नोटलाई खुम्चन नदिने, दक्षिणा दिदा खाममा राखेर दिने, नोटलाई अबिर, अक्षता, माटो, धमिरा, मुसा, आगो, पानी इत्यादिबाट जोगाउने, नोटलाई कच्याककुच्चुक नपार्ने, पोको नपार्ने र जमीनमा गाड्ने काम नगर्ने ।
नोटको हिफाजत गर्ने कुरा आफूले पनि बुझ्ने र अरुलाई बुझाउने । पूजाआजा गर्दा अथवा कुनै काम गर्दा मैलिएका हातहरुले सकेसम्म नोट नछुने । आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी नोट बैंकमा जम्मा गर्ने बानी बसाल्ने । बैंकमा चेक तथा एटिएम कार्डहरु प्रयोग गरी नगद कारोबार कम गर्ने बानी बसालौं ।